Ubalo-msebenzisi lwe-Intanethi kwiHlabathi liphela -Geofumadas
Iinkcukacha-manani zoMsebenzisi we-Intanethi kwiHlabathi liphela
NgoJuni, 2011 Phuma kakuhle, Internet kunye neBlogs, egeomates My
Kungekudala Impumelelo yangaphandle ihlaziye ukuya kunyaka-2011 amanani ehlabathi ngokungena kunye nokusetyenziswa kwe-Intanethi kwihlabathi liphela. Mhlawumbi ungoyena mthombo ubalaseleyo wokubonisana nolu hlobo lolwazi, hayi kwinqanaba lezwelizwekazi kuphela, kodwa nakwilizwe nakwinqanaba lolwimi.
Ndiyithatha le ngxelo ukubonisa ezinye iinkcukacha, nokudlulisa iindlela zendlela zendlela Egeomate, ngaphantsi kwenyanga emva kokukhishwa.
Itafile elandelayo ibonisa ukusasazwa kwe-2 yabantu abanokufikelela kwi-intanethi, i-30% emangalisayo ye-7 yabantu emhlabeni jikelele.
Iingingqi Lwabantu Abasebenzisi % kwihlabathi
ENyakatho Melika 347,394,870 272,066,000 13.00%
ELatin America kunye neCaribbean 597,283,165 215,939,400 10.30%
EMbindi Mpuma 216,258,843 68,553,666 3.30%
BEBONKE 6,930,055,154 2,095,006,005 100.00%
Okubangel 'umdla indlela Latin America kunye Caribbean nje 10%, nangona kunjalo ulwimi iSpanish ikwindawo yesithathu ezininzi ezisetyenziswayo kakhulu ehlabathini lonke, nokuthabatha kunye nokongeza Isidatshi Nesifretshi Spain le pesenti isezantsi 10.
Ukubona oko kwenzekayo EgeomateKunika umdla umahluko wezithuthi ezingezizo ezaseSpain ngokubhekisele kwinto endikhe ndasetyenziswa ukuyibona kwii-geofumadas. Jonga ukuba umfundi othetha isiNgesi uvela phi kwihlabathi liphela, kubandakanya amazwe afana neSpain, iPeru, iMexico, iArgentina neChile; Ngokungafaniyo nomfundi waseSpeyin ojolise kumazwe asemthethweni eelwimi nakwizixeko ezithile eUnited States.
Ke ukubhala ngesiNgesi kukubhala ngenene kwintengiso yehlabathi; Andikakwazi ukungena kwi-niche ye-AutoCAD kakhulu, kodwa kuyathakazelisa ukubona indlela iMicrostation, Manifold kunye neMobile Mapper ehamba ngayo; izihloko ekukho umxholo omncinci kwi-Intanethi. Le theyibhile ilandelayo ibonisa umahluko wemephu efanayo kodwa kwinqanaba lelizwe;
(1-2) I-United States ibalasele, isimilo sayo sifana ne-Spain kwii-geofumables, notyelelo oluninzi oluvela kwizixeko ezahlukeneyo. Nangona kungekho Madrid okanye iBarcelona etya uninzi lwezithuthi. Kwindawo yesibini yiKhanada, ngokungafaniyo neUnited States, zimbalwa kakhulu izixeko ezinabantu abaninzi ababalulekileyo.
(3-4) Kwindawo yesithathu yi-United Kingdom emva koko i-India, iyaqondakala kuba yayilikholoni lesiNgesi. Kodwa ngenxa yokuba kule minyaka idlulileyo ibinomtsalane omkhulu kwezobuchwephesha kwaye emva kokuba ililizwe lesibini elinabantu abaninzi emhlabeni, ilingana neMexico geofumadas.
(5) Kwaye kukho iBrazil, engafani nento esinokuyilindela ngokufana neSpanishi kunye neendawo ezikufutshane, indlela yokufikelela kuzo yiNgesi.
(6-10) La mazwe alandelayo, ngokulandelelana: iSpain, iAustralia, iJamani, iPhilippines, neVietnam. Iqela elinomdla, bonke bavela kwiqela lamazwe angama-20 kunye nabasebenzisi abaninzi be-Intanethi, ngaphandle kwe-Australia, eyimeko ekhethekileyo kuba yi-80% yabasebenzisi abavela kuyo yonke i-Oceania.
(11-15) La mazwe ma-5 ndiwabalulayo kuba njengoko imeko izinzile, banokuthatha indawo kwiqela langaphambili: iMexico, iMalaysia, iNetherlands, iSaudi Arabia neTurkey.
Le yimeko yamazwe aseSpanish, endandisele ndithethile ngaphambili. Amachaphaza abomvu ali-10 anezithuthi ezininzi, amanye alubhelu ngala alandelayo 5. Jonga indlela iMexico, iUnited States neSpain kuphela kwamazwe aneziganeko phakathi kwe-egeomate kunye ne-geofumadas.
Izibalo ziyabanda. Kodwa ukufunda kubalulekile kwaye kungaphezu kovuyo. Kuyinto enomdla ukubona kuyo Woopra njengomsebenzisi weelinye lamanqaku e-orange eIndiya, ukusuka kwi-Hyderabad, ungena kwi-Egeomate aze azibuze:
वेश्या ... iintsuku ezintathu zikhangele indlela yokwenza Amanqanaba omgangatho kunye ne-Civil 3D...
Okomzuzwana bendinoluvo lokuba lo mhlobo uhleli ecaleni kwendlela, ephethe unkontsho kunye nembande ukuthandabuza imfezi ... Kodwa enyanisweni, ungumsebenzisi njengathi sonke, eofisini esebenzisa i-AutoCAD, efuna ukutshintshela kwi-Mac kwaye ufuna kulo nyaka funda iMephu yeGuide.
Ukuba ufuna ukubona iinkcukacha ezininzi ze-intanethi, ndincoma Impumelelo yangaphandle.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Njengoko kumisa online shop
Post Next Ungasusa njani ii-comas kunye nee-hyperlink ukusuka kumanani kwi-ExcelOkulandelayo »